China Quality onyunyo video njikwa igbe Ahịa na Factory - Dongguan Yiwei nkenke ngwaike Products Co. LTD
.Lọ > Ngwaahịa > Nkwurịta okwu anwụ mgbatị akụkụ > Onyunyo video njikwa igbe
Onyunyo video njikwa igbe
Ihe: Aluminomã € Zine-alloy
Ndenye nkọwa nke onyunyo video njikwa igbe
Aluminiya € Zine-alloy
dị ka onye ahịa rịọrọ
Nkenke Die Nkedo
25days mgbe ugwo
Nkọwapụta nke igbe onyunyo vidiyo njikwa
Nkwakọ ngwaahịa na nzipu nke igbe nlele vidiyo
Poly bag / afụ bag + katọn + pallet, nwere ike inye mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, Shekou n'ọdụ ụgbọ mmiri, Huangpu mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ka ndị ahịa chọrọ.
Q: you na erekwa ụlọ ọrụ ma ọ bụ emeputa?
A: Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe tinyere ụlọ ọrụ azụmaahịa
A: Ee, anyị nwere ike ịlele dabere na sel gị ma mee ka ngwa ọrụ nwụọ.
A: 1. Anyị enweela ngwa ngwa na teknụzụ zuru oke
4. Anyị nwere ndị ahịa ahịa kachasị mma na otu ndị na-azụ ihe.
A: akpụzi: 50% nkwụnye ego maka ebu + 50% mgbe nnwapụta nnabata. Ogbe mmepụta: 40% nkwụnye ego maka iwu + 30% maka mmepụta ihe + 30% maka mbupu.
Tags na-ekpo ọkụ: Onyunyo video njikwa igbe, China, Ogo, Ahịa, Factory
Aluminium alloy anwụ n castfe n'èzí akara igbe
Aluminom alloy anwụ mgbatị akara igbe 5G network base ojii
Aluminium alloy anwụ mgbatị akara igbe maka 4G network base station